Abakhiqizi Nabahlinzeki Bemikhiqizo - Imboni Yemikhiqizo Yase-China
Umkhiqizi waseShayina Sulfur3.0, 450ppm vanadium FC 9...
1-5mm S 0.08-0.13% Iphromoshini ye-Graphite Petroleum Coke GPC
I-Graphite Petroleum Coke(GPC)
Imininingwane:FC: 99 % min S: 0.03% max Umlotha: 0.5 % max VM: 0.5 % umswakama ophezulu: 0.03 % max
Usayizi: 0.5-3mm; 1-5mm, 3-8mm, 8-30mm, 0-30mm
Ukupakisha: I-Jumbo Bags
Ngokwezidingo zamaklayenti, singanikeza ukucaciswa okuhlukile nosayizi.
Iseli/wechat/whatsapp: + 86-13730054216
Abanentshisekelo bamukelekile ukuxoxisana nathi ngebhizinisi.
I-Semi GPC/Semi #GraphitePetroleumCoke 1-5mm iyathengiswa #SemiGPC/Semi Graphite Petroleum Coke #Recarburzier #Carbonraiser
I-Semi GPC/Semi #GraphitePetroleumCoke 1-5mm iyathengiswa
Usayizi: 0-1mm, 1-5mm
Ukupakisha: izikhwama ze-jumbo noma izikhwama ezingu-25kgs esikhwameni esikhulu se-jumbo esingu-1MT
amandla okuhlinzeka: 1000ton/ngenyanga
Uma unezinkinga, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nami.
#petroleum #quality #manufacture #GPC
I-Low Sulfur Low Low Nitrogen Semi Graphitized Petroleum Coke njenge-Carbon Raiser ye-Metallurgy
I-Semi GPC/Semi Graphite Petroleum Coke
Ukupakisha: izikhwama ze-jumbo noma ngokwezidingo zamakhasimende
amandla okuhlinzeka: 500ton/ngenyanga
Siyakwamukela abantu abanentshisekelo ukuthi baqhubeke nokuxoxisana nathi ngebhizinisi!
123456Okulandelayo >>> Ikhasi 1/30